Warmly Welcome: လေမဖြတ်အောင် အခါးရည်ကို ဆောင်
လဘက်ရည်ဆိုင်က ခပ်ပေါပေါ အခါးရည်တော့ အမြဲ သောက်ဖြစ်တယ်။
နှစ်သစ်မှာ လုပ်ငန်းတွေ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ
သင်္ကြန်မတိုင်ခင် သင်္ကြန်မိုးများများရွာလျှင် အပူသက်သာနိုင်သည်ဟု ခိုင်လုံသော မိုးလေ၀သ သတင်းက ကျေညာသွားပါတယ်။
ပုံ / မိုးဇလ ..
တားမြစ် ကန့်သတ်နယ်မြေထဲ အလည်လွန်နေသော ကိုဝဲလ်ကမ်း စခန်းကို အမြန် သတင်းပို့ .. ..
(အဟိ ခြိတ်ချိုးနဲ့၊ အနော်လဲ ပါတယ်နော်)
အဟား အကိုရေ ကျနော်တို့ကတော့ လက်ဖက်ရည်မခေါ်ဘူးဗျ အခါးရည်ပဲ ခေါ်တာပဲ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုတာ ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတဲ့ နို့ဆီတွေ ထဲ့သောက်တာကို ခေါ်တာကိုးးး အဲ့ဒီဆိုင်တွေက ချပေးတဲ့ အလကားသောက်ရတာကို အခါးရည်လို့ ခေါ်တယ် ပြောရင် သောက်ချင်လာပြီ...
အခါးရည် တအိုးပေးပါဗျို့.... စကားမစပ် အဆင်မပြေရင် ဘလော့ အရမ်းမလည်နဲ့ဦးနော့် ချစ်ဖေကြီးတို့၊ ချစ်သမီးတို့ အဆင်ပြေရင်တော့ ကောင်းမယ်ဗျာ..
(အေ့ ဆိုပြီး ကုန်နေတဲ့ ဓာတ်ဘူးကိုလက်ညိုးပဲ ထိုးပြတတ်တယ်)
နှစ်သစ်မှာ ဂွတ်တစွာ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ဟုတ်တယ်နော်..နေပူပူမှာ ရေအေးအေးသာ သောက်ချင်ပေမယ့် အသောက်များသွားပြီးရင် လည်ပင်းနာပြီး အဆင်မပြေလှပါဘူး..ရေနွေးကြမ်းကို အအေးခံပြီး သောက်ဖြစ်ပါတယ်..လက်ဖက်ခြောက်ကတော့ မျိုးစုံပဲ..ကောက်ညှင်းမွှေး နဲ့ စပယ်တော့ အသုံးများတယ်..။
လှေကားရှည်နဲ့ တက်ရတဲ့ နယ်မြေတွေသွားဖို့ လှေကားထောင်နေရတာ အခုတလော အဆင်မပြေလှဘူးနော်..:)
ကိုဝင်းဇော်..သင်္ကြန်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော်..တောင်ကြီးမှာ အိုင်စီလာမှာဆိုတော့တော်တော်စည်မှာပဲ..ပုံလေးတွေတင်ပေးပါဦးနော်..။
ကိုဝင်းဇော် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ရင် လေဖြတ်တာကို ကာကွယ်တယ် ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်... နည်းလေး၁ခုရသွားပါတယ်.
အမွှေးအမျှင် များတယ်ဆိုလားမသိ ဟိဟိ
happy new year !!!!! ဖြစ်ပါစေ
အခါးရေ ။ ရေနွေးကြမ်း။ အဖန်ရေ ဘယ်လိုခေါ် ခေါ် ရေငတ်ပြေစေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ ။ ပြီးတော့ green tea ဆိုတာကလည်း ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပြောကြတယ် ။ အလှကြိုက်သူများအတွက် အဆီဓါတ်ကိုလည်းလျှော့ချပေးတယ် ဆိုပြီး အရောင်းသွက်နေကြတာဘဲ ။ ဟုတ် မဟုတ်တော့ မပြောတတ်ဘူး ။ စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ကြော်ငြာနေကြတယ်လေ ။
အကျော် အခွတော်တဲ့ကိုဝင်းဇော်ကတော့လေမဖြတ်နိုင်ပါဘူးနော် ။။။ လေ့ကျင့်ခဏ်းတွေ နေ့ တိုင်းလုပ်နေတာဘဲဟာ။ ဟဲဟဲ။
ဟိုနေ့က တိုက်အောက်မှာ လှေကားထမ်းပြီး လျှောက်သွားနေတာ တို့ကိုဝင်းဇော်ကြီးမှန်း မသိဘူး။ ဟီ ဟီ ဟီ ။ ဒီလိုမှန်းသိ အခါးရည် သောက်ဖို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကပ်စီးမနဲတတ်ပါဘူး။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အပန်းဖြေနိုင်ပါစေ။
ဒီမှာတော့ အမြဲ ရေနွေးသောက်တယ် ကိုဝင်းဇော်ရေ၊
အရောင်းအ၀ယ်က ပြောသလောက်လဲ မဟုတ်ပါဘူး
ခေတ်မီသူတိုင်း အခါးရည်ပဲ သောက်ကြတယ်။
နောက်ပြီး (***)ရွှင်တယ်လေ ...။
နှစ်သစ်ချိန်ခါမှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းပါစေ
စာတွေဖတ်သွားပါတယ် ကိုဝင်းဇော်
ကောက်ညှင်းရွက်မွေး ပါထည့်သောက်လို့ကတော့ ဆွေမျိုးတောင် ရေထားရလိမ့်မယ်။
ကျမက ကချင်ပြည်နယ်က ရှမ်းနီ--
ဟိုတုံးကလို ကိုဝင်းဇော်နဲ့ စီပုံးမှာ ရေးပြတဲ့
ရိုးရာအစားအစာ တွေကို သတိရရင်း
ဝေးး..ဦးချစ်ဖေကြီး တော်တယ်ဗျို့ ။ ကျေးဇူးဗျို့ ကြော်ငြာပေးလို့။ တကယ်ပြောတာပါ။ ပင်လောင်းမှာဆို ရေအေးမှ မသောက်ကြတာ။ အခါးရည်ပဲ သောက်တာ။ အခုလဲ လက်ဘက်ခြောက်တွေ ယူလာပြီး သောက်တုန်း။ ဆားလေးခပ်ပြီးသောက်ပါက အစာကြေ၏။။
လက်ဖက်ဆို အစိုအခြောက် အရည် အသုတ်
လက်ဖက်ခြောက်တွေရော စိတ်ချရပါ့မလားလို့ ပူနေတာ မောင်လေးရေ... အမတော့ အခါးရည်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သောက်တယ်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး လည်ချင်ရာ လည်နိုင်ပါစေနော်။
Hi.. Tea... ဗျာ... ဟား..ဟား။
လောလောဆယ် ပေါ့ဆိမ့်လေးတခွက်လောက် ဆွဲချင်တယ်ဗျာ။ ပြီးမှ လျှာထဲပိုစိမ့်သွားအောင် အဖန်ရည်လေး(အခါးရည်)လျာပေါ်ပြစ်ချလိုက်ချင်တာ။
အဲ့အရွက်ကို ညီတကယ် မသိဘူးအကိုကြီး..။ ဘယ်လို မျိုးလည်း..။
တုန်းတယ်ပြောပြော ..အ တယ်ပြောပြော..။
စိုင်းနောင့် လဖက်တော့ ကြော်ငြာပေးတယ်
ငါ့လဖက်တော့ စကားထဲ ထည့်မပြောပါလားကွ
အစ်ကိုရေ အခါးရည် လာသောက်ပါတယ်။
မိရိုးဖလာသောက်တဲ့ ဓလေ့လိုဖြစ်နေပြီ ကိုဝင်းဇော် ရေ့၊ မနက်လင်းတာနဲ့ ရေနွေးကြိုရတာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပါပဲ။ လူကို ဥပါဒ်မဖြစ်ရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပီ၊ ။
ချစ်ဖေကြီးတွေ၊ ချစ်သမီးတွေလည်းပြောတယ်။ မတွားရတဲ့ နေရာတွေလည်းတွားတယ်။ တတင်းပို့ရမယ်။ ( :P)
နေပူပူမှာ အခါးရေနဲ့ ထမင်းခြောက်ကြော်နဲ့ အလိုက်ပဲ ..
နမ့်လပ်ချောင်းမှာ ရေသွားကူးမယ် လိုက်မလား ။
သင်္ကြန်ရက် ဟိုပုန်းရေတံခွန်သွားမယ် ။ လိုက်မယ်ဆို ဖုန်းဆက်လိုက် ..
စာကြွေးတွေ အများကြီး အများကြီး ဖတ်သွားတယ် ကိုဝင်းဇော်ရေ ..
ခု နယ်မှာပဲလား၊ သင်္ကြန်ဘယ်မှာရှိနေမလဲ။
တကယ့် လူမှုရသ အခင်းအကျင်းစုံလင်စွာ ကျန်းမာရေးပညာကိုပါ မျှဝေသွားတာ အားကျအတုယူစရာပါပဲ ခင်မျာ။ စာနယ်ဇင်းသမားကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ တော်တော်များများကို တည့်ပြောသွားပြီး ”ရေခဲစိမ် ရေသန့်ဗူးတွေ တအားသောက်တော့လည်း အစာအိမ် ရောင်သလို ဖြစ်ပြီး တနေ့က ၀မ်းပျက်တာ ခံစားရတယ်“.. ဆိုပြီး မထိတရိ ကလိသွားပုံလေးကလည်း ပညာသားပါပါပေတယ်။ နှစ်သစ်မှာ ဆက်လက်ပြီး ယားပါစေကြောင်း၊ အားပါစေကြောင်း…..
(မာရေးသျှင်) ပြောခဲ့သလိုပဲ စာရေးတာ စုံနေအောင် ပြောသွားတယ်။ နက်မကောင်းတာရော၊ ရာသီဥတုပူတာရော၊ ရေသန့်ဆိုးကြိုးရော၊ နောက်တော့ အခါးရည်ပါတယ်။ နောက် အခါးခြောက်ပါတယ်။
နွေပူပူမှာ အခါးရည် ဝင်သောက်သွားတယ်ငါ့အကို နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ
မြန်မာပြည်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အလကားရတော့ အဖန်ရည်(ခ) အခါးရည် တစ်အိုးပြီးတစ်အိုး မှာသောက်ခဲ့တာ အခုမှ အကျိုးရှိမှန်းသိတော့တယ်။
အခုတော့ ပိုက်ပိုက်ပေးမှ ရတဲ့ အတွက် ဒီမှာ သုံးယောက် တစ်အိုး သောက်နေရတယ်...ဟွတ်.
သင်္ကြန်မတိုင်ခင် လှေကားရှည်ရှည် နှင့် လျှောက်သွားနေတဲ့ ကိုဝင်းဇော်ကို သိကြားမင်း ပေပုရပိုက် တွင် မှတ်တမ်းဝင်သွားကြောင်း မဟုတ်ကဟုတ်က ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြသွားပါတရ်....
ကောင်းကျိုးရှိရင် ဆက်ဆွဲတာပေါ့၊ အဟဲ ..
ကောင်းကျိုးမရှိတဲ့ အရက်နဲ့ ဘီယာတောင် ဆက်သောက်နေသေးတာပဲ ဒီလောက်လေးတော့ အေးဆေးပဲ ..
အရသာပိုရှိတယ်။ ရင်ချောင်စေတယ်၊ အစာကျေစေတယ်။
ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးကဋေ .......
ခုထိတော့ ရေသန်ပဲ သောက်တုန်း
ကြီးမှ ပြုပြင်မယ် အဟဲ ရတယ်ဟုတ်
ဟင်.. ကျနော့်ဘကြီးကျတော့ တနေ့ ၃ခွက် မကဘူး တနေ့ကို ရေနွေးကြမ်းအိုး ၄၊၅ အိုးကုန်အောင် သောက်နိုင်တဲ့သူကျတော့
လေဖြတ်သွားတာမှ တကိုယ်လုံးပဲ ဘီလိုဖြစ်တာလဲဗျ။